Moe Kya Shwe Ko's collection!
တီတီစောက်ဖုတ်လေးကိုအုပ်ထားတဲ့အတွင်းခံဘောင်ဘီပိတ်သားလေးကလဲ တီတီလေးရဲ့အချစ်၇ည်ချိုမြမြနဲ့ စိုစွတ်အိစက်နေတယ်။
ဆေးရုံတက်နေတဲ့ ယောက်ကျားမသိအောင် ဘေးခုတင်ကလူနာနဲ့ ခိုးလိုးတဲ့ ဂျပန်ကားလေး အရမ်းမိုက်တယ်
တစ်ခန်း ကျွန်တော်ကတစ်ခန်း ၊ မမနဲ့ညီမလေးကတော့ကျွန်တော့်ဘေးကအခန်းမှာပေါ့
မိဘတွေမရှိတော့ ဖေဖေနဲ့မေမေပဲသမီးလေးလိုစောင့်ရှောက်လာခဲ့တာလေ။ အခုဆို မမက ၂၈
ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်ပဲကျန်ခဲ့မှာလေ။ ဖြစ်ရဲ့လားပေါ့။ နောက်ဆုံးတော့သွားဖြစ်ပါတယ် သူတို့အရင်သွားကြည့်မယ် ညီမလေးက၂၁ နှစ်မကျော်သေးတော့လိုက်သွားလို့ရတယ်အဆင်ပြေပြီဆိုလာခေါ်မယ်ပေါ့။
ကြိုက်ကုန်း ရခိုင်မအလန်းလေး ဘော်ဒါတွေကိုပေးမယ်
သူ့ Fb Acc name က Pinky Poekaung
သူ့ facebook account အကောင့်ကနေ sex chat
ဖုတ်ဖုတ်လေးကို ကျပ်ပြီး စီးပိုင်နေတာပဲ
လိုးလို့ သိပ်ကောင်း ဘော်ဒါတွေ အဆင်ပြေရင် လက်ခုပ်သံလေးတွေကြားချင်တယ်
ပိုးကောင်ရဲ့ fb acc
ချစ်သူများနေ့မှာ ရှေ့တန်းရောက်တပ်မတော်သားတွေအတွက် အထူးဓာတ်ပုံ အရိုက်ခံခဲ့သော ဂုဏ်ရည်အေးကျော်
မြန်မာ့ထင်ရှားကျော်ကြားသော အလှမယ်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဂုဏ်ရည်အေးကျော်ကရှေ့တန်းရောက် မြန်မာ့တပ်မတော်သားများအတွက် စိတ်ဓာတ်ခွန်အား ဖြစ်စေမဲ့ အထူးသီးသန့်အလှဓာတ်ပုံများကို ချစ်သူများနေ့မှာ ရိုက်ကူးခဲ့တယ်လို့ လျှက်တစ်ပြက် သို့ ပြောပါတယ်။
" ဒါတွေက Public ကို ဖြန့်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူး အဓိက ရည်ရွယ်တာကတော့ အိုးအိမ်စွန့်ခွာပြီး ရှေ့တန်းရောက်နေရတဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော်သားတွေအတွက် စိတ်ဓာတ်ခွန်အားဖြစ်စေဖို့ပဲ ရည်ရွယ်တယ်။ အပြင်မှာ ရိုက်တဲ့ sexy ပုံတွေထက်တော့ နဲနဲပိုကြမ်းတယ်လို့တော့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒါမျိုးက အမေရိကန်မှာလဲ မာရီလင်မွန်ရိုးတို့လဲ လုပ်ခဲ့တာပဲ သမိုင်းရှိတယ်။ " လို့ ဂုဏ်ရည်အေးကျော်က ပြောပါတယ်။
အဆိုပါဓာတ်ပုံများကို ဗိုလ်ချုပ်မူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ အထူးဓာတ်ပုံဆရာက ဖေဖော်ဝါရီလ၊ ၁၄ ရက်နေ့မှာ နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ အထူးသီးသန့် စတူဒီယို တစ်ခုမှာ ရိုက်ကူးခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး။ ရိုက်ကူးမှု့ အောင်မြင်ရေး ကိစ္စအ၀၀အတွက် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဘူးလက်လှဆွေက အစစအရာရာ ကူညီပေးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။
တစ်ခြားအမျိုးသမီး အနုပညာရှင်တွေ အနေနဲ့လည်း ယခုလိုအစီအစဉ်မှာ ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးဖို့ စည်းရုံးသွားမှာ ဖြစ်ကြောင်းလည်း ဂုဏ်ရည်အေးကျော်မှ ပြောပါတယ်။
Photo - အလှမယ်ပြိုင်ပွဲဝင်စဉ်က ဂုဏ်ရည်အေးကျော်
ပုသိမ် GTC ကျောင်းမှ စုံတွဲ
ခု တလော အရမ်းဟော့ပ် ဖြစ်နေတယ့် ပုသိမ် GTC ကျောင်းမှ ချစ်သူစုံ တွဲရဲ့ ချစ်ရည်လူးနေတယ့်
ကိုယ်တိုင် ရိုက် Video လေးပါ ကောင်မလေး နာမည်က Su Su Mar ဖုန်းနံပါတ်ကတော့ 09254023645
သူ့ကောင်လေးကို ပြုစုတယ့်ပုံကြည့်ချင်ရင်တော့ အောက်က video အပိုင်း ၁ ကိုကြည့်ပါ
အပိုင်း ၂ မကြာမီ လာမည်
Labels: myanmar sex movie
ရန်ကုန်က မိတ်ဆွေတွေအတွက် မိန်းမကောင်းလေး
နာမည်က ဖြူလေးခိုင် နေရပ်ကတော့ ရန်ကုန် တိုင်း မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်မှာနေဒါပါ
တညကို သုံးသောင်းခွဲ ဝန်းကျင် လောက် ပေးရပါတယ် ဖောက်သည်အသစ် ဆိုရင် မသိသေးတယ့်သူဆိုရင် မလိုက်ပါဘူး
အပြုအစု ကတော့ ဘာကောင်း သလဲမမေးပါနဲ့ နောက်ပေါက်က လွဲပြီး ကျန်ဒါ အကုန်စိတ်ကြိုက် လုပ်ပေးပါတယ်
သူနဲ့ ဆက်ဆံဖူးတယ့်သူတစ်ယောက် ပေးပို့လာဒါဖြစ်ပါတယ် နာရီပိုင်း မလိုက်ပါ တယ့်
သူ့နဲ့ ဆက်ဆံချင်ရင် ဆက်သွယ်ရမယ့် ဖုန်းနံပါတ်ကတော့ 09254276892
(မှတ်ချက် - ဖုန်းဆက်လျင် ဖြူနဲ့ ထပ်တွေ့ချင်လို့ပါဟု ပြောပါ ဖောက်သည်အသစ် နှင့် မသိသောသူများအားလက်မခံသောကြောင့်ဖြစ်သည် )
Don't you see Zawgyi Font?
Pyae Phuu Khine
Aye Wut Yee Thoung
Ei Ei Myo Aung
Hnin Wut Yee Thoung
Khun Sint Naychi
Maw Phuu Maung
Pwint Lyar Moe Lay
Ray Bakkar Win
Thinzar Su Wai
Win Htut Taryar
Yaminnn Ko Ko
လအလိုက်တင်ပြီးခဲ့သည့်ပို့စ်များ February (31) March (41) April (33) May (47) June (48) July (74) August (63) September (23) October (5) November (8) December (15) January (16) June (1) July (1) February (1) May (1) July (3)